people Nepal » कोहली-कुंबले विवादपछि गवास्करले भने- विराटलाई नै सोध्नु प्रशिक्षक कसलाई बनाउने हो कोहली-कुंबले विवादपछि गवास्करले भने- विराटलाई नै सोध्नु प्रशिक्षक कसलाई बनाउने हो – people Nepal
कोहली-कुंबले विवादपछि गवास्करले भने- विराटलाई नै सोध्नु प्रशिक्षक कसलाई बनाउने हो
९ असार , मुम्बई । अनिल कुंबले र विराट कोहलीको विवादमा भारतीय टिमका पूर्व कप्तान सुनील गवास्करले भने टिमको कप्तानलाई मन पर्छ/पर्दैन भन्ने विषयलाई यति धेरै मान्यता दिइन्छ भने क्रिकेट सल्लाहकार समितिको के काम ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । बीसीसीआईको क्रिकेट सल्लाहकार समितिमा सचिन तेन्दुल्कर, सौरव गांगुली र वीवीएस लक्ष्मण छन् र टिमको प्रशिक्षक चुन्ने जिम्मा यिनै सदस्यलाई दिइएको हुन्छ ।
जिद्दी विराटले सीएसीको कुरा पनि नमानेपछि
लन्डन च्याम्पियन्स ट्रफीका समयमा क्रिकेट सल्लाहकार समितिले विराट कोहली र अनिल कुंबलेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो । तीनै सदस्यले अनिल कुंबलेलाई नै टिमको प्रशिक्षक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएतापनि विराटले यो निर्णयलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
कप्तानकै मनोमानी चल्ने हो भने सीएसीको काम के ?
सुनील गवास्कर यस घटनाका कारण धेरै निराश भएका थिए । टिमका खेलाडी र कप्तानले नै प्रशिक्षक चुन्ने भएपछि सिएसीको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने सिधै वेस्ट इन्डिजका खेलाडी र कप्तान कोहलीलाई सोधेर सबै निर्णय लिने भए सबैको समय किन खेर फाल्नु ? भन्दै प्रश्न गरे । जबदेखि यो मुद्दा अगाडि आएको छ तब देखि गवास्करले अनिल कुंबलेकै पक्षमा बयान दिइरहेका छन् । उनले यस मुद्दालाई अझ अघि नबढाई कोहलीलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
भारतीय टिमलाई गाली गरेपछि कुंबलेले यस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो
पाकिस्तानविरुद्ध १८० रनले लज्जास्पद हार बेहोर्नु परेपछि पनि टिमका कप्तान कोहलीले पाकिस्तानको तारिफ मात्रै गरे । तर यस विषयले उनीहरुका प्रशिक्षक भने पटक्कै खुसी थिएनन् । कुंबलेले खेल सकिएपछि उनीहरुलाई खुब गाली गरेका थिए । गाली खानु स्वभाभिक भएपनि स्रोतका अनुसार यसैका कारण खेलाडीहरु उनीप्रति रुष्ट भएका हुन् । उनले खेलाडीहरुलाई फाइनलमा अपेक्षा गरेभन्दा कम स्तरमा खेलेकाले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।
खेलाडीहरुलाई भने हारेकोमा केही दुःख लागेन
हारेपछि पनि टिमका खेलाडीहरुको अनुहारमा केही दुःख र पश्चाताप नरहेको देखेपछि प्रशिक्षक कुंबले झनै आक्रामक भएका थिए । उनीहरु खेलपछि पाकिस्तानका खेलाडीहरुसँग हाँसोठट्टा गर्दै गरेको देखा परेका थिए । त्यसपछि ड्रेसिङ रुममै गएर कुंबलेले टिमका बलरहरुलाई त्यस्तो खराब प्रदर्शन गरेपछि टिममा रहन नमिल्ने भन्दै कराएका थिए । उनका यस्ता तिता शब्दले विराट निकै निराश भए । सबै खेलाडीहरुले सक्दो कोशिस गरेका हुन् तर पाकिस्तानले अत्याधिक राम्रो प्रदर्शन गरेकाले पराजित हुनु परेको कोहलीले बताउँदै आएका छन् । उनको यस विषयमा प्रशिक्षकले भने कुनै पनि हालतमा सहमति नजनाउने बताएका छन् ।
कोहलीले भनेपछि बीसीसीआईले कुंबलेलाई जानकारी गरायो
यस विवादपछि बीसीसीआईका अधिकारीहरुलाई कोहलीले कुंबलेलाई प्रशिक्षकको रुपमा नरुचाएको बताएका थिए । यो कुराको जानकारी पाउने बितिक्कै कुंबलेले राजिनामा दिने मनसाय बनाएका हुन् ।